Tropico 4: Fanontana volamena, ahena 70% mandritra ny fotoana voafetra | Avy amin'ny mac aho
Tropico 4: Fanontana volamena, ahena 70% mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao lehibe 'Tropico 4: Gold Edition' miaraka amin'ny fitoviana amin'ny lalao angano Sin City, dia nahena nandritra ny fotoana voafetra ho € 9,99, ny vidiny mahazatra dia € 34,99. 'Tropico 4: Fanontana volamena'amin'ny Espaniôla tanteraka'.
Amin'ity lalao ity dia nomena anarana ho filohan'ny firenena Tropika Karaiba ianao. Na filoha be fiahiana ianao, technocrat, na crook, dia anjaranao ny mamadika an'i Tropico avy amin'ny repoblika akondro mahafinaritra ho lasa firenena matanjaka amin'ny taonjato faha-21 amin'ity fitambaran-tsaina feno fananganana tanàna sy simulator politika ity. Alohan'ny hividianana ny lalao dia vakio ny fampahalalana manan-danja napetrany ao amin'ny famaritana.
Mamorona paradisa anao mamolavola Tropico araka izay tianao. Afaka misafidy ianao Trano 100 ary azonao atao ny mamadika ny nosinao ho a toerana fialan-tsasatra, toby famokarana herinaratra, fanjakan'ny polisy na kely amin'ny zava-drehetra.
Tsy maintsy mandanjalanja ny fitakiana tabataban'ireo ankolafy politika an'i Tropico ianao miaraka amina ampongatan'andriana mahery lavitra raha mbola namanamana amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny varotra any ivelany ianao.
Ny fiainana any amin'ny nosy tropikaly dia tsy ny masoandro sy ny piadan coladas daholo! Miomana hiatrika loza voajanahary como el volkano, tsunami y rivo-doza.
Raiso ny fanambin'ny a Fomba fampielezana amin'ny Misiona 20 na mankafy fahefana tsy misy andraikitra amin'ny maody Sandbox.
Omeo ny toeranao ny olom-pirenena tianao indrindra amin'ny minisitera hampihatra ny programa governemanta.
Ento Tropico ho amin'ny taonjato faha-21 miaraka amin'ny fonosana Modern Times Expansion Pack: Mandrosoa a programa amin'ny habakabaka, mifehy ny fidirana amin'ny Internet ary mamorona maritrano marika toy ny katedraly diamondra ary ny "Babel Tower".
nohavaozina: 03 / 04 / 2014
Malagasy Bible: 1.1.4
habe: 5.76 GB
fiteny: Espaniôla, alemanina, frantsay, anglisy, italiana
mifanentana: OS X 10.7.5 na taty aoriana.
Vidio ny lalao 'Tropico 4: Fanontana volamena' mivantana avy amin'ny Mac App Store, amin'ny fipihana ny rohy manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Games » Tropico 4: Fanontana volamena, ahena 70% mandritra ny fotoana voafetra
Cook App Icon, mamorona sary masina anao